गोर्खा राइफल्सले जन्मभुमी प्रति गद्दारी गर्नेछैन: भोलि भारतले गद्दार गरे भारत माथी जाइलाग्ने छौ, जय नेपाल! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > गोर्खा राइफल्सले जन्मभुमी प्रति गद्दारी गर्नेछैन: भोलि भारतले गद्दार गरे भारत माथी जाइलाग्ने छौ, जय नेपाल!
गोर्खा राइफल्सले जन्मभुमी प्रति गद्दारी गर्नेछैन: भोलि भारतले गद्दार गरे भारत माथी जाइलाग्ने छौ, जय नेपाल!
admin May 22, 2020 प्रवास, समाचार	0
रमेश कार्की –
पेशागत हिसाबले म भारतिय सेनामा जागिर गर्छु। यो होइन कि मलाई नेपालको भन्दा भारतको बढी माया छ, यस्तो कदापी हुनै सक्दैन । म लगायत हामी हजारौं भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनु पनि पर्छ। यी सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताकै अनुरुप हुन। लाखौ युवा बिदेश पलायन भए जस्तै हो भारतीय सेनाको जागिरमा नेपाली युवाहरु होमिनु भनेको ।
ईण्डियन सत्ताले पहिलो पटक कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ, त्यो पनि ‘गोर्खा राईफल्स’का नाममा भर्ति गरिएका नेपालीहरुलाई। देशका नागरिकहरुलाई विदेशीका लागि भाडामा प्रयोग गर्न स्विकृति दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिंदैछ। नेपालका विरुद्धमा नेपालीहरुलाई लडाउने यो घृणित रणनीतिका बारेमा किन बोल्दैन् सरकार, नेपाली सेना र दलमा बसेका ईण्डियन भरियाहरु ? विश्वको कुनै पनि देशमा यस्ता सडकछाप अपराधिहरु सत्तामा छैनन । हेक्का रहोस् गोर्खा राइफल्सले आफ्नो जन्मभुमी प्रती कदापी गद्वार गर्ने छैन ।
मैले पढेको भुगोल बिषयमा नेपाल भन्दा भारत २२ गुणा ठुलो छ, चीन ६६ गुणा । भारतको उत्तरी भागमा पाकिस्तान पर्छ जस्लाई ईन्डियाले छिमेकी दुस्मन मान्छ। यो दुई देश बिच सम्बन्ध सधै अमैत्री नै रहन्छ, यद्यपि बाहिर अरुले सुमधुर देख्न सक्छन।ईन्डियाले आफ्नो सिमा रक्षाको लागि लाखौ फौज सिमामा खटाएको छ चौबीसै घण्टा तैनाथ राख्छ। अझ भनौ माइनस -२० डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाली इलाकामा पनि सेना तैनाथ छ र यो सम्भब पनि भएको छ।
यदि नेपाल भारत बिच सेनाको संख्या तुलाना गर्ने हो भने नेपालमा करिब १ लाख सेना छ भने भारतमा करिब २२.५ लाख सेना देखिन्छ। भुगोलको हिसाबले हेर्दा झन्डै बराबर देखिन्छ । किनकी नेपाल २२ गुणा सानो छ ईन्डिया भन्दा भौगोलिक बनावटले।
हामिले निकै सुनियो देखियो यो १० दिन यता भारतले सिमा मिच्यो भनेर, र हामिले सहि सुन्यौं पनि। यसको घोर भर्त्सना गर्नै पर्छ हरेक नेपालीले । तर मलाई एउटा सवाल आउँछ नेपालले सेनालाई बिबादित सिमामा किन खटाउन सकेन ? या किन चाहेन ? यदि सिमामा आफ्नो सिमा रक्षाको निम्ति खटाईन्थ्यो भने सायदै आउथ्यो यो अहिलेको विवाद ? कुरा उठ्न सक्छ शक्तिशाली देशसङ्ग लड्न सकिन्न भन्ने। यो हुनै सक्दैन। शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसार भर एउटै होला जुन अमेरिका देखिन्छ यतिबेला। के अरु कुनै देशले सिमा रक्षाको लागि सेना तैनाथ गर्दैन सिमामा.?
पक्कै गर्छ। के नेपालले गरेको छैनत ? सायद गरेको होला। गरेको भए खोइ सिमा रक्षा ? हामिले कहिले सुनेका छौ नेपाल भारत सिमामा सेना बिच यस्तो मुद्दा भयो भनेर ? नगरेको भए किन गरेन नेपालले ? यतिबेला यो प्रश्न तपाईं हामि सबै सच्चा नेपालिको मन भित्र उब्जिरहेको हुनुपर्छ।
कुनै पनि देशको सेनाको प्राथमिक काम भनेको देशको सिमा रक्षा नै हो। मौकामा आपत बिपतको लागि सेनाको निकै ठुलो सहयोग देखिन्छ तर यो सधै आइपर्ने समस्या होइन। आन्तरिक मुद्दा मामिलाको लागि प्रहरी छदैछ। के गर्छ नेपालि सेना ? के बाटो खन्ने करिडोर बनाउने काममा मात्र लागएर हुन्छ सेनालाई ? सेनाले अरु सर्बसाधारण जनताले गर्ने काम अबस्य गर्न सक्छ तर सर्बसाधारण जनताले सेनाको काम सजिलै गर्नै सक्दैन, यो सायदै सम्भब होला। सिमा सुरक्षाको लागि सेना खटिनै पर्छ। कहिले खटाउने सिमामा सेना ?
सिमा रक्षाको लागि चिन्ता जनतालाइ छ सरोकार वालालाई किन भएन। मलाई लाग्छ भारतिय बिस्तारबाद विरुद्ध नारा नेपाल भित्र गाउँ शहर र राजधानीमा घन्काएर यो समाधान हुँदैन , हुँदै हुँदैन । यसको लागि कुटनैतिक पहल हुनै पर्छ, सेनालाई बिबादित सिमामा तैनाथ गर्नै पर्छ।मलाई लाग्छ हामिले भारत विरुद्ध चर्का नारा घन्काउनु भन्दा सरकार विरुद्ध दबाबको नारा घन्काउनु पर्छ।
नत्र दुई चार दिनमा शान्त हुन्छ ,समाधान हुदैन। आखिरमा उहीँ हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स ! जय नेपाल……….!
पैसा कमाएर परिवार पाल्न बिदेश गएका नेपाली कामदारको कोरोनाले यसरी भयो दु’खद नि’धन
भारतीय TV च्यानललाई नेपालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन विप्लव समुहको माग
बीरगञ्जकाे मस्जिदमा बस्दै आएका तीन भारतीयमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि
श्रीमानको निधनपछि राजनीतिमा उदाएका विद्या भण्डारी र विद्या भट्टराई
अष्ट्रेलियामा कार्यरत १ नेपाली युवालाई जेल सजाय सुनाइयो – पुरा हेर्नुहोस
लकडाउनकै कारण पाल्न नसक्ने भन्दै भक्तपुरकि २२ बर्षिया महिलाले गरिन शिशुकाे ह’त्या!
रूकुम घटनाकाे नालीबेलीः प्रेम जोडीकाे कहानी यस्तो, साथीहरूकाे यस्तो त्रसादिपूर्ण बलिदानी! (भिडियो सहित)
यस्तो कहाली लाग्दो रूकुम घटना, ह’मलाबाट बचेकाले दिए यस्तो बयान (भिडियो सहित)
प्रधानमन्त्री ज्यु, अझै हिम्मत गर्नुस राष्ट्रवादी नेताको रूपमा युगौंयुग बाँच्नुहुनेछ
परदेशीले सोध्छन् : रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ जस्तो छ, दिदी प्लेन कहिले चल्छ ?
चीनसँगकाे यु’द्ध हारेर फर्किएकाे बेला भारतीय सेनाले शरण मागेपछि श्री ५ महेन्द्रले कालापानीमा शरण दिईबक्सिएको थियो
नेपालसंग रिसाएको भारतले फेरि गर्यो यस्तो घोषणा ?
एक गर्भवती महिलाको क्वारेन्टाइनमै निधन